“Madaxda Federaalku isma khilaafsanee waxaa is khilaafsan M/weyne Shariif iyo Sharciga” Prof. Juriile. – Radio Daljir
“Madaxda Federaalku isma khilaafsanee waxaa is khilaafsan M/weyne Shariif iyo Sharciga” Prof. Juriile.
Juunyo 6, 2011 12:00 b 0
London, June 06 – Prof. C/risaaq Cismaan Juriile oo ka tirsan golaha wakiillada ee Somaliya ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan golayaasha dawladda uu yahay mid u dhexeeya m/weyne Shariif iyo sharciga, taas oo micnaheedu yahay in M/weynuhu uu diidan yahay qodob sharci oo qeexaya doorashada sida uu xil dhibaanku sheegay.
Waxaa uu xildhibaanku tilmaamay in arrintu tahay mid qallafsan oo u baahan in la qaado tallaabo wax ku ool ah oo arrinta looga gun gaarayo.?ciddii xallin wayda arrin culus ma xallin karto mid fudud? ayuu yiri xildhibaanku.
Isagoo ka hadlayey war dhawaan uu sheegay M/weynaha Uganda oo ahaa inuu ciidamadiisa kale baxayo dalka Somaliya haddii wakhti hal sano ah loogu dari waayo hay?adaha federaalka ayuu sheegay xildhibaanku in ciidankaasi ay ku joogaan magaca midawga Afrika. Hadalka madaxweynuhuna uu ahaa mid uu kula hadlayey beesha caalamka ee uusan ahayn sida loo qaatay.
Prof. Jurile oo hadda jooga magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa waraysi uu xalay siiyey idaacadda Daljir ku sheegay in dawladaha caalamku ay ku wareereen xaaladda Somaliya ayna dadaal dheer galinayaan sidii xal deg deg ah loo gaari alahaa.
Madaxweyne Farole oo la kulmay Jaaliyadda Puntland iyo Madaxda dalka Uganda.